archana: चित्रमा रेल देख्नु र साँच्चै चढनु फरक हुन्छ नि हो
Posted by archana at 1/21/2009
धेरै धन्यवाद यति रमाईला जानकारीका लागि । पछि हामी विदेश जानुपर्ने भयो भने काम लाग्छ होला । सिक्दै गर्नुपर्यो नि मान्छे बन्न ।
अर्चनाजी राम्रो अनुभब...राम्रो लेख, अनि क्रमश... म अब १०/१० मिनेटमा तंपाईको ब्लग क्लीक गर्न मन लाग्छ तर लोडसेडिङ।
अब भोली बिहानै तंपाईको ब्लग क्लीक गर्छु।
तपाईंले USA बाट बल्कमा Hosting किनेर बेच्ने कस्लाई हो ? १० एमबि स्पेसलाई ५०० मा बेच्दा पक्कै घाटा हुन्थेन होला अनि त्यसैलाई ५००० म बेच्दा त त्यो क्रेता(स्वदेशी?)लाई भुसुक्कै पार्नुहुने रहेछ नि । हुनत तपाईंको विजनेश हो र पनि सुन्दै कस्तो कस्तो लाग्ने क्या ।
साधारण विद्यार्थी केही गर्न सिक्न चाहने तर पैसा नहुनेले सस्तोमा पाउथ्यो कत्ती मेरा कम्प्युटरका विद्यार्थी र सेवा मुलक सस्थाले त सित्तैमा नि पाउथे।
बिजनेस हाउस, अफिसलाई छुट्टै रेट। अहिले सम्म त कोही भुसुक्कै भएका छैनन बाचि राखेका छन्।
त्यसो त वेब स्पेसहरु तपाईं मार्फत सित्तैमा उपलब्ध भएको पनि थाहा पाएको थिएँ तर माथी कुरा निक्लिए अनुशार स्पस्ट हुन चाहेको मात्रै हो । यसले मैले प्रश्न उठाए झैं गरेर सोच्ने अरुलाई पनि बुझ्न मद्दत पुग्ला अझ अर्को कुरा भुसुक्कै भएछन भन्नुको अर्थ मरेछन भन्ने त होइन होला हौ ? जे होस धन्यवाद स्पस्ट पार्नुभएकोमा ।
ल अर्चना जी तपाइ त ब्लगर बाट ब्लगर्नी हुनुभएछ। थाहा छ डाक्टरनी हुनु डाक्टर नै पढ्न पर्दैन डाक्टर संग बिहे गरे पुग्छ, तर तपाइ त आफै काम गेरेर ब्लगर्नी हुनुभएछ। अस्ट्रेलिया पुरै घुमाउनुभएकोमा धन्यबाद।
तपाइ त ब्लगको धुरन्धर, मैले नेपाली ब्लगको इतिहास नालीबेली खोतल्न खोज्दैछु। तपाइ र तपाइका पाठकले यसमा पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ। ब्लगको नालीबेलीकको लिंख